Wakaaladda dawooyinka Ingriiska ayaa sheegtay in 7 qof oo tallaalka AstraZeneca qaatay ay dhinteen… – Hagaag.com
Wakaaladda dawooyinka Ingriiska ayaa sheegtay in 7 qof oo tallaalka AstraZeneca qaatay ay dhinteen…
Posted on 3 Abriil 2021 by Admin in World // 0 Comments
Wakaaladda dawooyinka ee Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday in 7 qof oo qaatay tallaalka AstraZeneca ee ka dhanka ah Coronavirus ay u dhinteen markii dhiigooda xinjiroobay, waxay ka mid yihiin wadarta guud ee 30 xaaladood oo la diiwaan geliyey illaa iyo hadda.
Hay’addu waxay intaas ku dartay inaysan helin wax warbixinno ah oo ku saabsan xinjirowga dhiigga ka dib markii ay isticmaaleen tallaalka ay sameeyeen Biontech iyo Pfizer.
Jimcihii, hay’addu waxay u sheegtay Financial Times iyo the Guardian in 7 qof oo qaatay tallaalka AstraZeneca ay dhinteen ka dib markii xaalado dhiigooda xinjiroobay oo dhif ah.
Hay’adda nidaamisa Dawooyinka iyo wax soo saarka arrimaha caafimaadka ee Ingiriiska, Wakaaladda Daawooyinka Yurub, iyo Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa xaqiijiyey in faa’iidooyinka tallaalku u leeyahay ka-hortagga “Covid-19” ay aad uga weyn yihiin khatar kasta ee ka imaan karta xinjirowga dhiigga.
Wakaaladda Daawada Yurub ayaa Arbacadii ku celisay in ay rumeysan tahay in tallaalku uu badqabo, halka khubaradu aysan helin arrimo gaar ah oo khatar ku ah sida da’da, jinsiga ama xaaladaha caafimaadka.
Wadamada qaar waxay ku soo rogaan xayiraad isticmaalka talaalka AstraZeneca, halka wadamada kale ay dib u bilaabeen talaalka iyagoo sii wadaya baaritaanada la xiriira warbixinada dhiig xinjirowga dhifka ah, mararka qaarna daran.
Nederland ayaa waxay ka joojisay Jimcihii tallaalka AstraZeneca dadka da’doodu ka yar tahay 60 sano, ka dib 5 kiis oo cusub oo haweenka ku soo kordhay, oo mid ka mid ah dhimatay. Halka Jarmalka sidoo kale uu qaatay go’aan la mid ah kaasi horaantii todobaadkan.
Australia gudaheeda saraakiishu waxay sheegeen maanta oo Sabti ah, in dalkooda uu sii wadi doono barnaamijkiisa talaalka ee talaalka AstraZeneca, in kasta oo lagu sheegay xaaladaha xinjirowga dhiiga oo walaac laga qabo badbaadada tallaalka.
Nin 44 sano jir ah ayaa galay Isbitaalka Melbourne maalmo kadib markii la siiyay talaalka AstraZeneca waxaana ku dhacay xinjirowga dhiiga oo daran, taasi oo ah xaalad ka hortageysa socodka caadiga ah ee wareega dhiiga.
Maamulka hay’adda badeecada dawooyinka ayaa waxay la kulmeen Kooxda Talabixinta Farsamada Australia ee Talaalka goor dambe oo Jimcihii ah iyo subaxnimadii maanta si ay u qaada dhigaan xaalada AstraZeneca.
Australia waxay bilowday olole tallaal oo loogu talagalay dad gaaraya 25 milyan bishii Febraayo, badankoodna waxaa la filayaa inay helaan tallaalka ay abuurtay Jaamacadda Oxford iyadoo la kaashaneysa shirkada AstraZeneca, waxaa socda in 50 milyan oo dhibic tallaalka ah laga soo saarayo gudaha.